တစ်ဦး EML ဖိုင်မှတ်တမ်းရန်ဂျီမေးလ်အီးမေးလ်ကို Save လုပ်နည်း
အီးမေးလ်ပို့ရန် & Messaging ကို ဂျီမေးလ်သိကောင်းစရာများ & Tricks
ဂျီမေးလ်အတွက် EML ဖိုင်မှတ်တမ်းအဖြစ်အီးမေးလ် Save လုပ်နည်း
အော့ဖ်လိုင်းမကယ်မယ့် Gmail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်ဦးထံမှ EML ဖိုင်ကို Create
Gmail ကို သင်တစ်ဦးကစာသားတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုတင်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ် ဖိုင် သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအီးမေးလ်ပရိုဂရမ်အတွက်ပြန်ဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး backup လုပ်ထားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်။
သင်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Gmail ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုကယျတငျနိုငျ ဖိုင် extension လှည့်ကွက်။ ရုံဂျီမေးလ်အီးမေးလ်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်နှင့်အတူဖိုင်တစ်ဖိုင်မှစာသားကယ်တင် .EML ဖိုင် extension ။
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး EML ဖိုင်မှတ်တမ်း Create?
သင်ရုံသင့်ရဲ့ Gmail ကိုဒေတာ Backup လုပ်ဖို့ထက်အခြားအကြောင်းပြချက်များအဘို့ဤအီးမေးလ်ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲနည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။
တစ်ဦး EML ဖိုင်အဖြစ်တစ်ဦး Gmail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လိုသောအဘို့အအသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအီးမေးလ်ဂလိုင်းအတွက်သတင်းစကားကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါလိမ့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်လူအများစုထက် EML ဖိုင် format နဲ့အီးမေးလျကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်ဝေမျှဖို့ပိုသဘာဝကျပါတယ် တစ်ကြိမ်မှာ၎င်းတို့၏အီးမေးလ်များကိုအပေါငျးတို့သဒေါင်းလုပ် ။
သငျသညျအစားကြောင်းလမ်းမယ့်အစားမူလသတင်းစကားကိုတဆင့်ပို့ခြင်း၏တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအီးမေးလ်ကိုမျှဝေချင်ပါတယ်လျှင်တစ်ဦး EML ဖိုင်ကိုဖန်တီးနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကြည့်ရှုပါ တစ်ဦး EML ဖိုင်မှတ်တမ်း Is ဘာလဲ? မေးလ်ကို Message ဖိုင် format နဲ့တကယ်ကိုသည်နှင့်အရာအစီအစဉ်များကိုသစ်ကို EML file ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သောအရာကိုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များသည်။
ဂျီမေးလ်အတွက် EML ဖိုင်မှတ်တမ်းအဖြစ်အီးမေးလ် Save
အဆိုပါ Gmail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်ပါ။
မှတ်စု: သင်အသုံးပြုနေ Gmail ကိုတို့က Inbox ထဲမှာ ? အစားသုံးအလျားလိုက်အစက် (လာမယ့်အချိန်ကိုမှ) နဲ့ခလုတ်ကိုသုံးပါ။
စာသားစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်အပြည့်အဝမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်း menu ကနေ Show ကိုမူလရွေးချယ်ပါ။
ဒီကနေသင် EML ဖိုင် format နဲ့အီးမေးလ်ရနိုင်နှစ်ခုကိုသီးခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်:
Method ကို 1:
ဒေါင်းလုပ်မူရင်းရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့် .EML ဖိုင် extension နှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကို save လုပ်ပါ။
မကယ်ဖို့ဘယ်လိုမေးတဲ့အခါ, အမျိုးအစားအဖြစ်သိမ်းဆည်းရန်ကိုအနေဖြင့်အားလုံးဖိုင်များကောက်: အစား Text Document ၏ menu ကို။
(ထိုကိုးကားမပါဘဲ) ဖိုင်ရဲ့အဆုံးမှာ ".eml" ထားပါ။
Method ကို 2:
Gmail ကိုအထက်အဆင့်3ကနေဖွင့်လှစ်ခဲ့သောစာသားအားလုံးမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ကူးယူပါ။
Windows ကိုအသုံးပြုသူများက: ကို Ctrl + တစ်ဦးကစာသားနဲ့ကို Ctrl + C ကိုမိတ္တူထိုသို့အားလုံးမီးမောင်းထိုးပြ။
MacOS: စစ်ဌာနချုပ် + A စာသားကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်, Mac ဖြတ်လမ်းဖြစ်ပြီး, Ctrl + C ကိုအရာအားလုံးကိုကော်ပီကူးရန်အသုံးပြုသည်။
Notepad ++ သို့မဟုတ် bracket နဲ့တူစာသားအယ်ဒီတာထဲသို့စာသားအားလုံး paste ။
က .eml ဖိုင် extension အသုံးပြုနိုင်အောင်ဖိုင်ကို save လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ Gmail ကို Inbox ထဲမှာအမြန်ထုတ်လိုက်ဖို့ကိုဘယ်လို
စိစစ်မှုများကိုသုံးပြီး Gmail ကိုအီးမေးလ် forward ပြုလုပ်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
Windows Live Mail ကိုတစ်ဦးက Gmail အကောင့်ကိုသုံးစွဲနည်းညွှန်ကြားချက်များ
ဘယ်လိုဂျီမေးလ် မှစ. ဖျောလက်ခံသူများမှအီးမေးလ်ပေးပို့ပါရန်
သင်က IMAP ကိုဂျီမေးလ်နှင့်အတူအဘယျသို့ Get သလား?
ယင်းကို Message ထွက်ခွာမရှိရင် Gmail ကိုပူးတွဲပါအစမ်းကြည့်ရန်လုပ်နည်း
Gmail ကိုအရေးကြီးအဖြစ်ကို Message ခွဲခြားအဘယ်ကြောင့်အထဲက Find
ဂျီမေးလ်များအတွက် Feature ကိုသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုများကိုအကြံပြုဖို့ကိုဘယ်လို
ဂျီမေးလ် Issue အခြေအနေ Check လုပ်နည်း
တိရစ္ဆာန်ရုံသူဌေးကြီး PC အတွက် Code, အမေးအဖြေများနှင့်အရိပ်အမြွက် Cheats
အသံမှတ်တမ်းတင်အတွက် bit နှုန်း vs bit အနက်
2018 ခုနှစ်တွင်ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက် Buy မှ 10 အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များ
တစ်ဦးက Slim Touch ကို: အဆိုပါ 2016 Amazon Kindle
ဗီဒီယိုဂိမ်းများ Reality မှစ. ကယ်တင်ခံရနိုင်ပါသလား?
အဆိုပါ Darbee DVP-5100CIE ဗီဒီယိုပရိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
တစ်ဦးကအဆင့်-by-step သင်ခန်းစာ - သင်၏ကိုယ်ပိုင် podcast Make လုပ်နည်း
ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေး cheat - အဂ္ဂိရတ်ကုဒ်များ
့ Droid ၏စစ်တိုက်: Maxx2vs. Motorola က Turbo 2
အဆိုပါ Outlook ကို Select လုပ်ပါအမည်များ Dialog ကို၏ပြောင်းခြင်းစီအမိန့်
IPhone5ကိုဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ဆော့ဝဲအင်္ဂါရပ်များ
တစ်ဦးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု Mailto Link ကိုဖန်တီးနည်း
အိုင်ဖုန်း 8 ဘလူးတုသ် Keyboard ကိုမှုများ
သင့်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာ Keyboard ကိုနှင့်မောက်စသန့်ရှင်းအောင်ထားပါလုပ်နည်း
ဟက်ကာ မှစ. ကိုယ်တော်၏ Passwords များကိုကာကွယ်ပါ
သင့်ရဲ့ iPod touch တွင်ဘက်ထရီကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် 17 နည်းလမ်းများ
မှန်ကန် Yahoo Mail နဲ့အတူနှောင်ကြိုး Send ဖို့သင်ယူပါ
PS2 အပေါ်ဘီအမ်အိပ်စ XXX က Cheat ကုဒ်များနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များ